ဖြစ်ပါ့မလားမောင် – Grab Love Story
ကျွန်တော် ဂျီတီစီကျောင်းသားဘ၀တုန်းကပေါ့ဗျာ…ဆယ်တန်းအောင်ပြီး ပထမနှစ်စတက်ချိန်ပေါ့ အဲဒီတုန်းက ကျောင်းကိုရောက်စမှာ တက်္ကသိုလ်ကောလိပ်ဆိုတာရုပ်ရှင်တွေ ၀တ်္တုတွေထဲကလို စိမ်းစိမ်းစိုစိုအေးအေးချမ်းချမ်းရှိမှာပဲလို့ထင်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် မှော်ဘီဂျီတီစီဟာ တကယ့်ကိုမဲဇာပဲဗျို့ ကြည့်လေရာမှာဖုန်တသောသောနဲ့လယ်ကွင်းတွေအထက်တန်းကျောင်းအဆင့်သာရှိတဲ့ ကျောင်းဆောင်တွေ မခံနိုင်လောက်အောင်ပူပြင်းတဲ့နေရောင်တွေဟာကျွန်တော့်ရဲ့စိတ်ကူးထဲက ကောလိပ်ကျောင်းသားဘ၀လေးကို ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တော့တာပဲကျွန်တော်ဆို ရောက်စကချက်ချင်းတောင် ကျောင်းပြောင်းဖို့ စိတ်ကူးမိခဲ့သေးတယ် ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ဖို့ ဒီလောက်တော့ အဆင်းရဲခံနိုင်ရမှာပေါ့ဆိုတဲ့အဖေ့ရဲ့စကားကြောင့် ကျွန်တော်ဆက်နေမိခဲ့တာ ဒါပေမယ့် မကြာခင်မှာပဲ ကျောင်းမပြောင်းဖြစ်တာမှန်လိုက်လေခြင်းလို့ ကျွန်တော်အမြင်မှန်ရသွားခဲ့ပါတယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုကန်္တာရကြီးထဲမှာ အိုအေစစ်လေးတစ်ခု မမျှော်လင့်ဘဲ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့လို့လေ……
သူမရဲ့နာမည်က ရှယ်လီတဲ့ (မှတ်ချက်-နာမည်ပြောင်းလဲရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါသည်) သူတို့ရဲ့မေဂျာမှာတော့ကွင်းလို့တောင်ခေါ်လို့ရပါတယ် ၀င်းပကြည်လင်နေတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ ပြည့်ဖြိုးအိစက်တဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူပါလှတဲ့မိန်းကလေးဆိုတဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ချုချင်သူ ကိုကိုမောင်မောင်တွေက ဒုနဲ့ဒေးပေါ့ဗျာ အဲဒီထဲမှာ အီဖေကိုယ်ကလဲ တစ်ယောက်အပါအ၀င်ပေါ ဟီး..ပြောရင်တော့ ကိုယ့်ဂုဏ်ကိုယ်ဖော်သလိုများ ဖြစ်နေမလားမသိဘူး ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းငယ်ငယ်ကတည်းက စော်ကြည်ဘဲတစ်ယောက်ပဲဗျ (ကြုံတုန်းကြော်ငြာဝင်တာ) ဒါပေမယ့် ငယ်ငယ်တုန်းက မိန်းကလေးတွေနဲ့ အရောဝင်ရတာ ကိုယ်စိတ်ထဲ သိပ်ပြီးသဘောမကျဘူး (ခုနဲ့များ ကွာပ) ဒါကြောင့် မိန်းကလေးတွေနဲ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေလာခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်ဟာ သူလေးနဲ့ကျမှ ဘယ်လိုဖြစ်တယ် မသိပါဘူးဗျာ…… ကဲဗျာ..ပရိသတ်ကြီးလည်း ကောင်းခန်းမရောက်သေးလို့ အိပ်ငိုက်ကုန်ကြပြီ ထင်တယ်……ဒီတော့..လိုးရင်းပြောရရင်..(အဲ..ယောင်လို့)လိုရင်းပြောရရင် ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြိုက်သွားရောပေါ့ဗျာ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ပထမဆုံး ချိန်းတွေ့ကြတာပေါ့ဗျာ….
(ဒန်..တန့်..တန်) ပြောရရင်တော့ ရီစရာပဲဗျ ပထမဆုံးချိန်းတွေ့တာပန်းခြံတော့ပန်းခြံမှာပဲဗျဒါပေမယ့်…ဟီး…ဆူးလေပန်းခြံမှာဗျ ဘေးမှာ လူတွေက အများကြီး ဒါပေမယ့်ပရိသတ်ကြီး စိတ်မပျက်ကြပါနဲ့ ကောင်းခန်းလာမှာပါ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်က ပန်းခြံမှာချိန်းပြီးတော့ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ကြတာပါ ဒီလိုနျဲ့ကစနမူသါ တစ်တွဲဝယ်ပြီး ၀င်ကြည့်ကြတယ် ခုံမှာထိုင်စတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အနားမကပ်ရဲဘူး…….. တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်က စမ်းပြီးတော့ လက်ကလေးကိုင်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ..မရုန်းဘူးဗျ..ဒါနဲ့..နဲနဲရဲလာပြီးပခုံးလေးဖက်ကြည့်တယ်ဗျ သူကတော့ ရှက်နေတာလားကြောက်နေတာလားမသိ ငြိမ်နေတာပဲ…… ဒါနဲ့…နောက်ဆင့်တက်တော့တာပေါ့ သူ့မျက်နှာလေးကိုဆွဲယူပြီး နှုတ်ခမ်းလေးကိုစုတ်နမ်းပြစ်လိုက်တယ် မျက်လုံးလေးစင်းကျသွားပြီးကျွန်တော့်ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖက်ထားတယ် ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာတော့ ဘုရားပွဲကြီးကိုလှည့်လို့ ဒါနဲ့ လက်တစ်ဖက်ကသူရဲ့နို့လုံးလုံးလေးကို ဖမ်းကိုင်လိုက်တော့ တွန့်ကနဲဖြစ်သွားလေရဲ့ သူ့လက်တစ်ဖက်ကကျွန်တော့်လက်ကိုကိုင်ပြီး ပြန်ဖယ်တယ်..
ဒါပေမယ့်ဘယ်ရတော့မလဲ… တလုံးဖယ်ရင်နောက်တစ်လုံးကိုင်တာပေါ့ ကြာတော့သူလည်းမရုန်းတော့ဘဲ ငြိမ်သွားရော… ဒီတော့ နောက်တဆင့်တက်ပါလေရော လက်ကိုအကျီအပြင်က ကိုင်နေရာကနေ အောက်အဖြည်းဖြည်းလျှောပြီး ဗိုက်သားလေးကို ရွရွလေးပွတ်ပေးတယ် အဲဒီကတဆင့် အတွင်းကနေအပေါ်ကိုပြန်တက်တော့ ဘရာစီယာလေးကိုကိုင်မိပါလေရော ကျွန်တော့်ရဲ့လက်ကို ဘရာစီယာအောက်အသာလျှိုသွင်းပြီး နို့သီးခေါင်းလေးကို ရွရွလေးပွတ်ကြည့်တော့ သူ တွန့်ခနဲ တွန့်ခနဲဖြစ်သွားပြီး နို့သီးခေါင်းလေးတွေ သိသိသာသာထောင်တက်လာပါလေရော ကျွန်တော့်မှာလဲ အာရုဏ်ကိုနှစ်နေရာခွဲထားရတော့ တော်တော်အလုပ်ရှုပ်တယ်ခင်ဗျ ကြာလာတော့ ကျွန်တော်လည်းတော်တော်ရဲတင်းလာပြီး လက်က အောက်ကိုဆင်းပါလေရောအဲဒီတော့ သူကမျက်လုံးလေးပွင့်လာပြီး မောင်..ဒါတော့မလုပ်နဲ့ကွာတဲ့ ကျွန်တော်ကလည်းနာထောင်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ပေါင်လေးကိုပွတ်ပေးနေတာပေါ့ အဲဒီကနေ မသိမသာ လက်ကိုဟိုနေရာလေးနား တဖြည်းဖြည်းတိုးတိုးသွားရင်းနဲ့ ပေါင်လေးနှစ်လုံး ဆုံချက်ကိုရုတ်တရက် အုပ်ပြီးကိုင်လိုက်တာပေါ့ အဲ…နောက်မှသိရတာ သူက အဲဒီနေ့က ရာသီလာနေတယ်တဲ့ဗျာ တော်တော်ကံဆိုးတဲ့ကျွန်တော်ဗျာ ကျွန်တော်ရဲ့လက်ကအမျိုးသမီးလစဉ်သုံးပစ်္စည်း ကြီးကိုကိုင်မိတော့ ရုတ်တရက်လန့်သွားတာပေါ့
ဘာကြီးမှန်းမှမသိတာ အဲဒီတော့ သူလည်းရှက်သွားပြီး ကျွန်တော့်နားကိုလုံးဝမကပ်တော့ဘူးဗျာ ဒါ..ကျွန်တော့်ရဲ့ပထမဆုံး အတွေ့အကြုံပေါ့…ဒီနေ့တော့ တော်သေးပြီ နောက်နေ့မှ ကျောင်းတွင်းဇာတ်လမ်းများဆက်မယ် ဘိုင့်ဘိုင်……. ကျွန်တော်တို့ ဂျီတီစီရဲ့ထုံးစံက အတန်းအားလုံးတစ်ပြိုင်တန်းတက်ရတာမဟုတ်ပဲ တစ်တန်းတက်လို့ နှစ်ဝက်လောက်ရောက်မှ နောက်တစ်တန်းက စတက် အဲဒီအတန်းနှစ်ကုန်စာမေးပွဲဖြေခါနီးမှ တခြားတစ်တန်းကထပ်စ အဲဒီလိုပုံစံမျိုး ကျောင်းတက်ရတာဆိုတော့ကျောင်းမှာ အခန်းလွတ်တွေက အမြဲရှိနေတတ်တယ်ဗျ ဒီလိုအခန်းလွတ်တွေထဲကမှကျောင်းရဲ့အနောက်ဖက် လက်တွေ့ခန်းတွေ ရှိတဲ့ဖက်ကအခန်းတွေက အစွန်ကျပြီးလူပြတ်တဲ့အတွက် အတွဲတွေကြိုက်တတ်ကြတယ် ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဒီအခန်းတွေကို ရင်ခွင်နန်းတော်လို့ နာမည်ပေးထားတယ် ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတက်နေတဲ့အချိန် ဒီအခန်းတွေက လွတ်နေတော့ ကျွန်တော်တို့အတွဲလဲ သူများနည်းတူ ဒီအခန်းတွေမှာသွားထိုင်ကြတာပေါ့ဗျာ အခန်းထဲက စာသင်ခုံတစ်လုံးကို နံရံနားကပ်လိုက်ပြီး နှစ်ယောက်သားထိုင်ကြတယ် လူပြတ်ပြီး တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အခြေအနေက နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ကာမဆန်္ဒတွေ တနည်းတဖုံတက်ကြွလာစေပါတယ်
ကျွန်တော်လည်း သူ့ကိုယ်လေးကိုတင်းတင်းဖက်ပြီး နှုတ်ခမ်းခြင်းစုတ်နမ်းလိုက်တယ် သူကလဲအလိုက်သင့်ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲဝင်လာပါလေရော….. ဒီတစ်ခါ သူ့နို့လေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုင်တဲ့ အခါကျတော့ အရင်လို မရုန်းတော့ဘူးဗျ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်းနို့လေးကို အတွင်းရောအပြင်ရောပွတ်သပ်ပေးလိုက်တယ် တင်းကျပ်နေတဲ့ဘရာစီယာလေးကို ပေါ်လှန်တင်လိုက်ပြီး လက်ငါးချေုာင်းနဲ့ သူနို့လုံးလုံးလေးကို ဖျစ်ညှစ်ပစ်လိုက်တော့ သူ့ရဲ့ အသက်ရှုသံလေးတွေ ပိုကျယ်လာတာပေါ့ဗျာ အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်နှုတ်ခမ်းကို သူ့ရဲ့ နှုတ်ခမ်းကနေခွာပြီး သူဝတ်ထားတဲ့ အ၀ါရောင်တီရှပ်လေးကို အပေါ်ပင့်တင် နို့လေးကို ကုန်းစို့မယ်လို့ခေါင်းကိုငုံ့လိုက်တော့ အား..ပါး..ပါး.. လှလိုက်တဲ့ နို့လေးဗျာဖြူပြီးဝင်းအိနေတဲ့ အသားအရောင်ရှိတဲ့ လက်သီးဆုပ်သာသာနို့လုံးလုံးလေးပေါ်မှာ ပန်းနုရောင်ရဲရဲ နို့သီးခေါင်းလေးနှစ်ခု ထောင်နေလိုက်ပုံများ… ခုချိန်ထိမျက်စိထဲကကို မထွက်ဘူးဗျာ ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုမှ စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ပဲ ဗိုက်ဆာနေတဲ့ကလေးနို့စို့သလိုကုန်းပြီးအငမ်းမရကို စို့ပစ်လိုက်တာပဲဗျို့ လက်တစ်ဖက်က နို့အုံလေးကိုဆုပ်နယ်ရင်း ကျန်တဖက်က ၀မ်းပြင်းသားမွတ်မွတ်လေးကိုပွတ်ပေးနေမိတယ်… ဒီလိုနဲ့ သူရောကျွန်တော်ပါတော်တော်လေး အရှိန်ရလာပြီး ကာမဒီရေကျောမှာ မျောစပြုလာတော့ထုံးစံအတိုင်း နောက်တဆင့်တက်ဖို့လုပ်ပါလေရော ကျွန်တော့်ရဲ့ အငြိမ်မနေနိုင်တဲ့လက်တွေကသူ့ရဲ့ပေါင်သားလေးတွေဆီကိုရောက်သွားပြီးအထက်ကအောက်. .အောက်ကအထက်စုန်ချည်ဆန်ချည်ပွတ်သပ်ပေးနေတော့ သူ့ရဲ့လက်ကလေးနှစ်ဖက်ဟာကျွန်တော့်ကျောပြင်ကိုအားမလိုအားမရနဲ့ပြန်ပြီးပွတ်သပ်နေပါတယ်…..
ကျွန်တော်ပဲ ကံကောင်းတာလို့ပြောရမလားအဲဒီနေ့က သူဝတ်လာတာ စကတ်ထမိန်လေးဆိုတော့ သူ့ရဲ့ထမိန်အတွင်းကို ကျွန်တော်လက်ရောက်ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူနေတာပေါ့ဗျာ ပေါင်လယ်ထိ ရောက်နေတဲ့ သူ့ရဲ့စကတ်အကွဲကြောင်းလေးကတဆင့် အတွင်းထဲကို ကျွန်တော့်လက်ထိုးသွင်းလိုက်တယ်သူကလဲမျက်စောင်းလေးတစ်ချက်လှမ်းထိုးရုံကလွဲပြီး ဘာမှမပြောရှာပါဘူး… ဒါနဲ့ပေါင်သားနူးနူးညံ့ညံ့လေးနှစ်ခုကိုလက်နဲ့ဖြည်းဖြည်း ဆွဲပွတ်ရင်းရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဆီကိုမသိမသာ လှမ်းသွားတော့ သူက ပေါင်လေးနှစ်လုံးကို စိထားတယ်ဗျ…. ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း နို့သီးခေါင်းလေးကိုမထိတထိကိုက်ပေးလိုက်တော့မှ ..အ…လို့မတိုးမကျယ်လေးအော်ပြီး ပေါင်လုံးလေးနှစ်လုံး ပြန်ကွဲသွားတယ်(ဟဲ..ဟဲ….ဒီလိုလာစမ်းလို့ဘယ်ရမ လဲ)ဒီတော့မှ ပေါင်တွင်းသားလေးကိုရွရွလေးပွတ်ပြီး ပေါင်ဂွကြားလေးကို လက်ချောင်းလေးနဲ့တို့ထိကစားလိုက်တယ်…… ဒီအခါမှာ သူရဲ့အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးက ဂွဆုံနေရာမှာ စိုစိစိုစိဖြစ်နေတာကို သတိထားမိလိုက်တယ်….. ဒါအချိန်ကောင်းပဲလို့ ကျွန်တော်သိလိုက်ပြီး ဘောင်းဘီဂွလေးဘေးနားကနေ အသာလျှိုလို့ သူ့ရဲ့အဖုတ်လေးကို လှမ်းစမ်းကြည့်လိုက်တော့ သူ့ရဲ့တကိုယ်လုံး ကြက်သီးမွေးညှင်းတွေ တဖျင်းဖျင်းထသွားတာ တွေ့လိုက်ရတယ်…
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကျွန်တော်က ငယ်ငယ်ကတည်းက မိန်းမအင်္ဂါကို ဒီလိုထိဖူးကိုင်ဖူးဖို့မပြောနဲ့…..အနီးကပ်တောင်မြင်ဖူးတာမဟုတ်ဘူးဗျ (ဗီဒီယိုတွေထဲမှာတော့ ခပ်လှမ်းလှမ်းက တွေ့ဖူးတာပေါ့ဗျာ) ခုလိုနဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ကြုံမိတဲ့ အခါကျတော့ ဘာပြောကောင်းမလဲဗျာ…. အစိလေးကိုစမ်းကြည့်လိုက် အောက်ဘက်အပေါက်ကို လက်နဲ့ထိုးကြည့်လိုက် အမွှေးလေးတွေကို ကလိလိုက်နဲ့ အရုပ်သစ်ရတဲ့ကလေးလို ကိုင်မ၀ဖြစ်နေတယ် ကျွန်တော်က အဲဒီလိုကလိလေ သူက မရိုးမရွဖြစ်လာလေနဲ့ နောက်ဆုံးမှာ…. မောင်..ကျွန်မ မနေနိုင်တော့ဘူးကွာ တခုခုလုပ်မှာဖြင့် လုပ်တော့လို့ ပါးစပ်ကဖွင့်ပြောလာတဲ့အထိဖြစ်လာတယ် ဒါနဲ့..ကျွန်တော့ရဲ့လက်ခလယ်ကို အောက်ဘက်ကအပေါက်ထဲ ဖြည်းဖြည်းချင်း ထိုးထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့ သူ့ရဲ့ အပေါက်ကလေးက ကျပ်သိပ်နေပေမယ့် အထဲကထွက်လာတဲ့ပျစ်ချွဲချွဲအရည်တွေကြောင့် လက်ချောင်းတစ်ခုလုံး အစအဆုံးဝင်သွားပါလေရောပြီးတော့မှ အထဲကပြန်ထုတ် နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ထိုးထည့် ပြီးတော့ပြန်ထုတ်ဒီလို ခဏခဏလုပ်ပေးလိုက်တော့ သူ့ရဲ့ခန်္ဓာကိုယ်လေး တဖြည်းဖြည်းကော့လာပြီး ကျွန်တော့်ကိုအတင်းဖက်ထားလေရဲ့ သူကတင်းတင်းဖက်လေ ကျွန်တော်က ပိုပြီးမြန်မြန် လုပ်လေနဲ့ နောက်ဆုံး..အင့်..အင့်..ဆိုတဲ့မသည်းမကွဲ ငြီးသံလေးနဲ့အတူ အထဲက အရည်တွေ တစိမ့်စိမ့်စီးကျလာပါလေရော.. သူလဲ..ဟင်း..ဆိုပြီးသက်ပြင်းရှည်ကြီးချပြီးတော့ ငြိမ်ကျသွားလေရဲ့…. ဒီလိုနဲ့ကျောင်းကအခန်းလွတ်တွေထဲမှာ နှစ်ယောက်တည်းကမ်္ဘာတည်လာခဲ့တာ နှစ်လသုံးလလောက်ကြာလာတဲ့အခါကျတော့ နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာ အားမလိုအားမရဖြစ်မှုတွေ ကြီးထွားလာခဲ့ကြပါတယ်…
ဒါပေမယ့် ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ ဒီထက်ပိုဖို့ကလည်း အခွင့်အရေးကမရှိ ဒီအခန်းတွေက စာမသင်ဘူးဆိုပေမယ့် ကော်ရစ်ဒါမှာ ဖြတ်သွားဖြတ်လာတဲ့ ကျောင်းသားတွေ ရှိတတ်သလို ဆရာတွေနဲ့ ကျောင်းကရုံးဝန်ထမ်းတွေကလည်း ဆပ်ပလိုင်းချက် တွေရှိတတ်တော့ သူ့ပစ်္စည်းလေးနှိုက်တဲ့အဆင့်ထက်မပိုခဲ့ပါဘူး ဒါပေမယ့် သူတော်ကောင်းကို နတ်ကောင်းမ တတ်သလို သူယုတ်မာကိုလည်း နတ်ဆိုးမ တတ်ပါတယ် ကျွန်တော်အတွက်လည်း ကာမနတ်ဆိုးက တစ်နေ့မှာ စောင်မကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ် ဖြစ်ပုံက ဒီလိုဗျ…… ကျွန်တော်တို့ကျောင်းရဲ့မနီးမဝေး မှော်ဘီမြို့စွန်လောက်မှာ စုပေါင်းရုံးဆိုတဲ့ကားမှတ်တိုင်ရှိတယ် (မင်းသိင်္ခရဲ့ မနောမယခြံရောက်ဖူးတဲ့သူတွေဆို သိပါလိမ့်မယ်) အဲဒီကားမှတ်တိုင်နားမှာ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က အိမ်ငှားပြီးလာနေတယ် သူက ကျွန်တော့်ကို အိမ်သော့ပေးထားလေ့ရှိပြီး သူ့အိမ်ကိုကျွန်တော်နဲ့ သဘောရှိလွှဲထားတယ် အဲဒီမှာ ဇာတ်လမ်းကစတော့တာပဲဗျို့ ပထမတော့ ကျွန်တော်မှာဒီလိုအကြံအစည်မရှိပါဘူး ဒါပေမယ့် တစ်နေ့ကမှာ ရှယ်လီကကျွန်တော့်ကို မောင်ရယ်..တစ်နေ့တစ်နေ့ ကျောင်းထဲမှာပဲ ချိန်းချိန်းတွေ့နေရတာ ကျွန်မတော့စိတ်ညစ်လာပြီ တခြားအေးအေးဆေးဆေးရှိမယ့်နေရာ သွားကြရအောင်လို့ စကားစလာတယ် ဒီတော့ ကျွန်တော်လည်း ဟိုအိမ်ကိုသတိရသွားပြီး ဒါဆို မောင်နဲ့လိုက်ခဲ့ဆိုပြီး တစ်ခါတည်းခေါ်လာခဲ့တာပေါ့ အိမ်လေးကသိပ်တော့မဆိုးလှဘူးဗျ သပ်သပ်ရပ်ရပ်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ ဘေးခြံတွေနဲ့လည်းအလှမ်းကွာတယ် သူကပထမတော့သိပ်မလိုက်ရဲဘူးတွန့်ဆုတ်တွန်ဆုတ်ဖြစ်နေတယ်
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ကလက်ဆွဲပြီးခေါ်လာခဲ့ရတယ်… အိမ်ထဲရောက်တော့ လွယ်အိတ်တွေဘာတွေ နေရာတကျထားပြီး ကျွန်တော်ကခုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်လှန်ပြီးအိပ်လိုက်တယ် သူကတော့ မ၀ံ့မရဲနဲ့ ခုတင်စောင်းပေါ် တင်ပါးလွှဲပြီး ၀င်ထိုင်တယ် အချစ်..လာကွာလို့ ကျွန်တော်ကခေါ်လိုက်တော့ သူက ထိုင်ပြီးစကားပြောရအောင် ကွာတဲ့ လာပါအချစ်ရာ…မောင့်လက်မောင်းပေါ် ခေါင်းအုံးပြီး လာအိပ်ပါလို့ပါးစပ်ကခေါ်ရင်း လက်ကလည်း အတင်းဆွဲအိပ်ခိုင်းတော့မှ လက်မောင်းပေါ် ခေါင်းလေးတင်ပြီး ပက်လက်လှန် အိပ်လိုက်တယ် ဒီအခါမှာ..သူ့ရဲ့မို့ဖောင်းနေတဲ့ ရင်သားနှစ်မွှာဟာ.. တောင်ပူစာလေးနှစ်လုံးလို တင်းကနဲ့ ဖောင်းတက်သွားတယ် ကျွန်တော်လည်း အဲဒီနို့လေးတွေကို လက်နဲ့အုပ်ပြီးပွတ်ပေးရင်း ရောက်တတ်ရာရာ စကားတွေပြောနေကြတယ် ကြာလာတော့ သူ့ရဲ့မျက်လုံးလေးတွေ စင်းကျလာပြီး…အိပ်ပျော်သွားပါလေရော ကျွန်တော်လည်း ပိုင်ပြီဆိုပြီးတော့ သူ့အကျီကြယ်သီးလေးတွေ တစ်လုံးချင်း အသာလေးဖြုတ်ပစ်ပစ်လိုက်တယ် ဒီအခါမှာ သူ့ရဲ့အနက်ရောင်ဘရာစီယာလေး အောက်ကနေ အတင်းရုန်းကန်ထွက်နေတဲ့ ရင်သားဝင်းဝင်းလေးနှစ်လုံးကို တပ်မက်ဖွယ်မြင်တွေ့လိုက်ရတယ် ကျွန်တော်လည်း ဒိန်းဒလိန်းနတ်ဖမ်းစားလို့ ရင်ခုန်သံတွေတောင် မမှန်ချင်တော့ဘူးဗျာ ဒါပေမယ့် ဘရာစီယာချိတ်လေးက ကျောအောက်ရောက်နေတော့ ဖြုတ်ဖို့ အခွင့်အရေးမသာဘူးဗျ
ဒါကြောင့် အပေါ်ပိုင်းခဏရပ်ထားပြီး အောက်က ထမိန်လေးကို လှန်တင်ကြည့်လိုက်တယ် ဖြူဖြူဝင်းဝင်းခြေသလုံးသားလေးရယ် အဲဒီအထက်က ပေါင်တံပြည့်ပြည့်အိအိလေးရယ်ကျော်သွားတဲ့နောက်မှာတော့ သူရဲ့ အနက်ရောင်အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးပေါ်လာပါလေရောဗျာ…… ကျွန်တော်ကြားဖူးတာတစ်ခုရှိတယ်ဗျ မိန်းမတွေအတွင်းခံအ၀တ်အစားကို အနက်ရောင်တွေချည်းပဲဝတ်ရင် လိင်ဆွဲဆောင်အား ပိုရှိတယ်တဲ့ခင်ဗျ (ကျူးပစ်မမတို့ မှတ်ထားရန်) အဲဒီစကားမှန်မမှန်တော့မပြောတတ်ဘူးဗျာ လောလောဆယ်မှာတော့ အနက်ရောင်အတွင်းခံတွေအောက်က ဖြူဝင်းနေတဲ့ အသားစိုင်လေးတွေကြည့်ရတာ အသက်ရှုဖို့တောင် မေ့သွားမိတယ် သူ့ရဲ့ အနက်ရောက်အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးရဲ့ မို့ဖောင်းနေတဲ့ ခွဆုံနေရာလေးမှာအမွှေးလေးတစ်ပင်နှစ်ပင် အပြင်ဖက်ကို ထွက်နေတာတောင်တွေ့ရတယ် ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်း အဲဒီနေရာလေးကို ငုံ့နမ်းပစ်လိုက်တော့ ချွေးနံ့လေးနဲ့အတူမွှေးတေးတေးနဲ့ စောက်ဖုတ်ရနံ့လေးကို ခံစားမိလိုက်ရတယ်…. (သူများအတွက်တော့ မွှေးချင်မှမွှေးမှာပေါ့ဗျာ ကျွန်တော့စိတ်ထဲ မွှေးတယ်လို့ထင်တာဘာဖြစ်လဲ) ဆီးခုံဖောင်းဖောင်းလေးကို လျှာလေးနဲ့သပ်ပြီး လျပ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲ သူနိုးသွားတော့ ချက်ချင်းကြယ်သီးတွေပြန်တပ်ဖို့လုပ်တယ် အဲဒီအခါမှာ ကျွန်တော်လည်းအလုပ်များသွားပြီး သူရဲ့နှုတ်ခမ်းအစုံကို အမြန်စုပ်ပစ်လိုက်ပြီး ရင်သားလေးတွေကိုလည်း လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဆုပ်နယ်ပေးလိုက်တယ်……. ဒီတော့မှ ငြိမ်သွားပြီးအလိုက်သင့်လေးနေပေးတယ်
ကျွန်တော်လည်း အခွင့်အရေးကို လက်လွတ်မခံဘဲ ဘရာစီယာချိတ်ကို လက်နဲ့စမ်းပြီးဖြုတ်တယ် တခါမှ ဖြုတ်ဖူးလို့လားမသိဘူး ဖြုတ်ရခက်လိုက်တာဗျာ..ချွေးတောင်ပြန်တယ် ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာတော့ ချိတ်ပြုတ်သွားပြီး နို့အိအိလေးနှစ်လုံးက အပြင်ဘက်ကို ဆတ်ခနဲခုန်ထွက်လာတယ် ဒီတော့မှဘရာစီယာကို အဆုံးထိချွတ် နို့သီးခေါင်းလေးတွေကိုသွားနဲ့ကလိရင်း လက်က ဆီးခုံမို့မို့လေးကို ပွတ်သပ်လေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ညည်းသံတိုးတိုးလေးပြုရင်း…ကျွန်တော့်လက်ကို အတင်းဖမ်းဆုပ်ထားတယ် ကျွန်တော်လည်း ဘောင်းဘီလေးကိုတစ်ရစ်ချင်း လိပ်ပြီးချွတ်ပစ် လိုက်တော့ မည်းနက်နေတဲ့ ဆီးခုံမောက်မောက်လေးက ဘွားခနဲ ပေါ်လာတာပေါ့ဗျာ…… သူ့ရဲ့နို့သီးခေါင်းလေးတွေကိုစို့နေတဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ပါးစပ်ကို တဖြည်းဖြည်း အောက်ဆွဲချပြီး ဗိုက်သားလေးတွေကို လျှာနဲ့လျက်၊ချက်လေးတွေကို လျှာနဲ့ကလော် အဲဒီကနေတဆင့် အမွှေးမဲမဲလေးတွေကို ပါးစပ်နဲ့ငုံပြီးစုပ်လိုက်တယ် ပေါင်လေးနှစ်လုံးကို ဆွဲဖြဲလိုက်တော့ ၀င်းအိနေတဲ့ ပေါင်တံနှစ်လုံးကြားမှာ ပန်းနုရောင်ရဲနေတဲ့ အစိလေးရယ် အဲဒီအောက်ကရဲနေတဲ့ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေရယ် အရည်ကြည်လေးတွေစိမ့်ကျနေတဲ့ အောက်ကအပေါက်လေးရယ်ဟာ ကျွန်တော်ကို ကိုကိုရေလာပါတော့လို့ ဆွဲဆောင်ခေါ်နေသလိုပါပဲ…..
ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း သူရဲ့အစိလေးကို လျှာဖျားနဲ့ တို့လိုက်တော့ သူ့တကိုယ်လုံး ဆတ်ကနဲတုန်သွားပြီး လက်သီးကိုကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ် ကျွန်တော်လဲ အစိလေးကိုငုံပြီးစုပ်လိုက် သွားနဲ့မထိတထိလေး ကိုက်ပေးလိုက် နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကြား လျှာစောင်းလေး ထိုးထည့်ပေးလိုက်နဲ့ ၅မိနစ်လောက် နှူးပေးလိုက်တော့ သူလဲ ဘယ်လိုမှမနေနိုင်တော့ဘဲ ကျွန်တော်ဆံပင်ကိုကိုင်ပြီး သူ့အဖုတ်နဲ့ ကျွန်တော်မျက်နှာ ဆွဲဆွဲပြီးပွတ်နေလိုက်တာဗျာ ကျွန်တော့်မျက်နှာတစ်ခုလုံးလည်း သူ့ရဲ့စောက်ရည်တွေနဲ့ ရွှဲပြီးပြောင်လက်လို့…… ကျွန်တော်လည်း အချိန်ကောင်းကိုလက်လွှတ်မခံဘဲ သူ့ရဲ့စောက်ရည်တွေရွှဲအိုင်နေတဲ့ စောက်ပတ်အ၀လေးကို ကျွန်တော်ရဲ့လီးထိပ်နဲ့ တေ့လိုက်တယ်…… ဒီတော့ သူလန့်သွားပြီး ကျွန်တော်ရင်ဘတ်ကိုတွန်းထားတယ် မောင်…. ဖြစ်ပါ့မလား.. ကျွန်မကြောက်တယ်တဲ့ ကျွန်တော်ကလည်း စကားနဲ့မတုံ့ပြန်တော့ပဲ သူ့ရဲ့နို့သီးခေါင်းလေး နှစ်ခုကို တလည့်စီစို့ပေးလိုက်တယ် သူပြန်ပြီးငြိမ်ကျသွားတဲ့အချိန်ကျမှ အသာလေးချော့ပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့လီးကိုထိုးသွင်းလိုက်တယ် အင့်..ခနဲအော်ပြီး ခါးလေးကော့တက်သွားတယ် သူ့ရဲ့စောက်ပတ်လေးက ကျဉ်းကျဉ်းကျပ်ကျပ်လေးပေမယ့် စောက်ရည်တွေ စိုရွှဲနေတာကြောင့် လျောလျောလျှုလျှူဝင်သွားတယ်
ဒါပေမယ့် တစ်ဝက်နီးပါးဝင်ပြီးချိန်မှာ အထဲက အပျိုစင်အမှေးပါလေးကြောင့် ဆက်ပြီး ထိုးထည့်လို့ မရတော့ဘူး သူကလည်း..မောင်.. နာတယ်..ပြန်ထုတ်ကွာလို့ မျက်ရည်လေးစမ်းစမ်းနဲ့ ပြောရှာတယ် ကျွန်တော်လည်း ပြန်ထုတ်သလိုလိုနဲ့ နောက်နည်းနည်းဆုတ်ပြီး အားနဲ့ဖိသွင်းလိုက်ချိန်မှာတော့ အ..ခနဲ..အော်သံလေးနဲ့အတူ အမှေးပါးလေး ပေါက်သွားတာကို ခံစားမိလိုက်ရတယ် ဒီတော့မှ ကျွန်တော်လည်း ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်နဲ့ တစ်ချက်ချင်းအသွင်းအထုတ်လုပ်ပေးလိုက်တယ် သူမလည်း ပထမတော့ရုန်းကန်နေရာကနေ အလိုက်သင့်လေး လိုက်ပြီးလှုပ်ရှားလာတယ် ကျွန်တော်လည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နှေးရာကနေ မြန်လာတော့ သူရဲ့အသက်ရှုသံလေးမြန်လာပြီး ပါးစပ်ကလဲအား..ကနဲ..အား..ခနဲ ငြီးသံလေးတွေ ထွက်လာတယ် ကျွန်တော်လည်း မာန်တက်လာပြီး အရှိန်ကို မြန်နိုင်သမျှမြန်အောင် သွက်သွက်ကလေး လှုပ်ရှားပေးလိုက်တော့ ခါးလေးအစွမ်းကုန်ကော့တက်လာပြီး သုံးမိနစ်လောက်ကြာတဲ့အခါ သူ့ရဲ့စောက်ပတ်ထဲက အရည်တွေပွက်ကနဲ..ပွက်ကနဲကျလာတယ် သူကတော့ တချီပြီးသွားပြီးပေါ့ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ လိုရာပန်းတိုင်ကို မရောက်သေးတဲ့အတွက် လီးဟာ ထောင်မတ်နြေ့ပီး ပုတ်သင်ညိုခေါင်းငြိတ်သလို တဆတ်ဆတ်တုန်ခါနေဆဲပေါ့ဗျာ
ဒါနဲ့ သူ့ကိုတခြားပုံစံပြောင်းလုပ်ဖို့ စဉ်းစားကြည့်တယ် ကျွန်တော်လည်း တချီပြီးအောင် ဆွဲပေးထားရတော့ နဲနဲမောချင်ချင်ဖြစ်နေပြီ (ဆေးလိပ်တန်ခိုးတွေပေါ့ဗျာ) ဒါနဲ့သူ့ကို အပေါ်ကတက်ထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ် ပထမတော့ အင်တင်တင်နဲ့ဗျ ဒါပေမယ့် လီးရဲ့အရသာကိုသိပြီးသူဆိုတော့ ကြာကြာမမူနိုင်ပါဘူး…… ကျွန်တော့်စိတ်တိုင်းကပဲ အပေါ်ကနေ ကားယားခွထိုင်ပြီး သူ့ရဲ့စောက်ပတ်အ၀မှာ လီးကိုတေ့လိုက်တယ် ပြီးမှ ဖြည်းဖြည်းချင်း တရစ်ပြီးတရစ် ချော့ပြီးသွင်းနေတယ် ကျွန်တော်လည်း အသာလေးငြိမ်နေလိုက်ပြီး လီးကိုမတ်နေအောင် ထောင်ပေးထားလိုက်တာပေါ့ တဖြည်းဖြည်းသွင်းရင်းသွင်းရင်းနဲ့ အဆုံးထိရောက်သွာတော့ ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်ပြီးဆွဲထုတ်နေတယ်ဗျ သူ့ရဲ့စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေက လီးဝင်သွားတုန်းက လီးနဲ့အတူညက်ပြီး အထဲကိုလိပ်ဝင်သွားကြပြီးတော့ လီးလည်းပြန်ထွက်လာရော အလိုက်သင့်လေးပဲ ပြန်အန်ထွက်လာကြတာကိုကြည့်ရင်း ကျွန်တော်ပိုပြီး မာန်ထလာတာပေါ့ဗျာ
ဒီလိုနဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်းအသွင်းအထုတ်လုက်နေရင်းက စိတ်ကြွလာတော့ ထုံးစံအတိုင်း မြန်လာတယ် မြင်းရိုင်းတစ်ကောင်ကို စီးနေတဲ့သူပုံစံမျိုးနဲ့ ခုန်ခုန်ပြီးဆောင့်နေတော့သူရဲ့နို့အုံဖြူဖြူလေးနှစ်လုံးဟာ နိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်နဲ့ လိုက်ပြီးခုန်ပေါက်နေလိုက်ပုံများကြည့်လို့တောင်မ၀ဘူးဗျာ သူအပေါ်ကဆောင့်လိုက်တိုင်း ကျွန်တော်က အောက်ကနေခါးကော့ပြီး စည်းချက်ညီညီ လိုက်ဆောင့်ပေးနေလိုက်တယ် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျွန်တော်လီးကလဲ မာသထက်မာလာပြီးဖီးလ်တွေလည်းအရမ်း တက်လာတော့ မကြာခင်ကျွန်တော် သုတ်ထွက်တော့မယ်ဆိုတာသိလိုက်တယ် သူ့ကိုကြည့်တော့လည်း ပြီးခါနီးဆဲဆဲ အခြေအနေမျိုးရောက်နေတာကိုတွေ့ရတော့ ကျွန်တော်လည်းစိတ်ထိန်းမထားတော့ပဲ သုတ်တွေ ဒလဟော လွှတ်ပေးလိုက်တာပေါ့ မရှေးမနှောင်းမှာပဲ သူလဲနောက်တချီပြီးသွားတော့ ခါးလေးကော့သွားပြီး… ခန်္ဓာကိုယ်လေး ဆက်ခနဲ ဆတ်ကနဲဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးကျတော့ သူ့ရဲ့နို့အုံဖြူဖြူလေးနှစ်လုံးကို ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်နဲ့အပ်ပြီးလီးတောင်မချွတ်နိုင်တော့ပဲ မောမောနဲ့ အိပ်ပျော်သွားလေရဲ့….သူ့ရဲ့စောက်ပတ်လေးထဲကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့သုတ်ရည်တွေနဲ့ သူရဲ့စောက်ရည်တွေရောပြီး တစိမ့်စိမ့်နဲ့ စီးကျနေလိုက်တာ အိပ်ရာခင်းကို ရွှဲရောဗျာ…ပြီးပါပြီ